USB မှ BIOS အဟောင်း၌၎င်းကိုမပံ့ပိုးနိုင်သည့်အနေဖြင့်မည်သို့ boot တက်ရမည်နည်း Linux မှ
USB က BIOS အဟောင်းထဲကိုမထည့်သွင်းနိုင်အောင်ဘယ်လို boot တက်ရမလဲ
နောက်တစ်ကြိမ်တွင်၊ BIOS အဟောင်းကို၎င်းကိုမပံ့ပိုးသောကွန်ပျူတာ၌ CD မှမည်သို့ boot လုပ်ရမည်နည်း။ သို့သျောလညျး အချို့သောကွန်ပျူတာများသည်ကွန်ပျူတာများမှ CD မှ boot လုပ်ရန်ခွင့်ပြုသော်လည်း USB port မှခွင့်မပြုပါကံကောင်းထောက်မစွာ, USB ကနေ boot လုပ်ဖို့လှည့်ကွက်တစ်ခု ဤအခြေအနေမျိုးတွင် USB, CD / DVD နှင့် hard drives များအတွက်ပထမ ဦး ဆုံး load လုပ်သည့် PLoP Boot Manager ကိုအသုံးပြုသည်။
1.- PLoP Boot Manager ကို download လုပ်ပြီး download လုပ်ထားသောဖိုင်ကို zip လုပ်ပါ။
2.- ပုံကိုစီဒီထဲကူးထည့်ပါ plpbt.iso.
3.- CD ကို CD drive ထဲသို့ထည့်ပြီးသင်နှစ်သက်သော Linux distro ပါသော USB မှတ်ဉာဏ်ချောင်းထဲသို့ထည့်ပါ။
4.- Reboot လုပ်ပြီး BIOS ကို CD reader မှ boot လုပ်ရန်သေချာအောင်လုပ်ပါ။
အားလုံးကောင်းသွားရင်ညာဘက်မှာရှိတဲ့ပုံလိုမျိုးမြင်ရပါလိမ့်မယ်။ ရွေးချယ်မှုကိုသာရွေးချယ်ရန်ကျန်ရှိသည် ယူအက်​​စ်ဘီ မီနူးကနေ။
အရင်းအမြစ်: Pendrive Linux ကို
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » FileLet ရဲ့ UseLinux » USB က BIOS အဟောင်းထဲကိုမထည့်သွင်းနိုင်အောင်ဘယ်လို boot တက်ရမလဲ
၎င်းကိုကျွန်ုပ်သိပြီးဖြစ်သည်၊ ၎င်းသည် distros tester အတွက်၊ gnu / linux ကိုဖြန့်ဖြူးလိုသူအားလုံးအတွက်ရိုးရိုးလေး၊ ထိရောက်သောနှင့်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် USB တပ်ဆင်မှုများသည်ပိုမိုမြန်ဆန်သည်။ Plop ဖန်တီးသူများသည်လုံခြုံရေး၊ ဗိုင်းရပ်စ်နှိမ်နင်းရေးနှင့်စနစ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးကိရိယာများနှင့်အတူသူတို့၏ distro များကိုလည်းဖြန့်ချိခဲ့သည်ဟုထင်သည်။
yeah !!! ငါရှာနေတာငါဒီပြmyနာရဲ့အဖြေပဲ .. ကျေးဇူးတင်ပါတယ် !!
ဤသည်မှာကျွန်ုပ်ဖတ်ဖူးသမျှအကောင်းဆုံး gnu / linux ဘလော့ဂ်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်ပို့စ်တစ်ခုတည်းကိုလက်လွတ်မခံပါ။ ဤကိရိယာသည်ကျွန်ုပ်အချိန်ကြာမြင့်စွာရှာဖွေနေခဲ့သည့်အရာဖြစ်သည့်အတွက်အလွန်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်! ပွေ့ဖက်! ရှင်ပေါလု။
အော်စကာ vergara ဟုသူကပြောသည်
ကောင်းတယ် ကျွန်ုပ်သည်သူ့ကိုမသိခဲ့ပါ၊ ကျွန်ုပ်သည်ဤသို့သောအရာတစ်ခုကိုရှာဖွေနေသည်။ ယခုတွင်ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏ကွန်ပျူတာဟောင်းပေါ်တွင် Linux ကို install လုပ်နိုင်ပြီဖြစ်သည်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်!
Oscar Vergara အားပြန်ပြောပါ
Esteban Kluser ဟုသူကပြောသည်
Windows ၏ bootable iso image အတွက်အလုပ်လုပ်ပါသလား။
မထင်ဘူး ... 🙁
အောက်ပါငါ့ထံသို့ဖြစ်ပျက်။ ငါ pendrive ကိုဖတ်ရှုဖို့ .iso ထုတ်ပေး, ကကောင်းစွာနှင့်အလွန်ကောင်းစွာ။ ပြနာကငါ grub ထဲကို ၀ င်လိုက်တာနဲ့ keyboard ကိုမဖတ်ရတဲ့အချိန်မှာဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်ုပ်တွင်ကီးဘုတ်ကိုဖတ်ရန်စိတ်ချရသော bios (ရှိပြီးသား usb ဖြစ်သော) ရှိပြီးသားဖြစ်သည်။ သို့သော် Ubuntu 10 ပုံရိပ်ကိုငါထည့်သောအခါ၊ တပ်ဆင်လိုသော၎င်းသည်မယူပါ။ ၁၅ စက္ကန့်ပိုကောင်းတဲ့အချိန်ကစပြီး (live version ကိုတင်သင့်တယ်) က count ကပြန်လာရင် loop ကနေပြန်လာရင်စပြီး keyboard ပြproblemနာဖြစ်မယ်၊ မဖြစ်လည်းငါသံသယရှိတယ်။
Reinaldo Astudilo ဟုသူကပြောသည်
အားလုံးကိုကြိုဆိုပါ၏။ ကျွန်ုပ်သည် bootable usb ဖြင့် canaima ကိုပြန်လည်ရယူရန်ကြိုးစားနေသော်လည်းအကူအညီစတင်ရန်လိုအပ်ပါသည်။ သို့သော်၎င်းကိုစတင်သောအခါကျွန်ုပ်သည် boot error စတင်သည်ဟုပြောသောအခါကျွန်ုပ်သည်ပရိုဂရမ်များစွာနှင့်ကြိုးစားခဲ့ပြီးမည်သည့်ရလဒ်မျှမရရှိခဲ့ပါ။ မင်းရဲ့အဖြေတွေ၊ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တွေကိုထပ်မံစောင့်နေပါတယ်
Reinaldo Astudillo သို့စာပြန်ပါ
FreedroidRPG - Diablo ပုံစံ RPG ပေမဲ့ကောင်းမွန်တဲ့ Linux